“Soomaaliya Dimuqraadiyadda Haka Barato Somaliland” Dr Edna Adan Ismaaciil | Hangool News
“Soomaaliya Dimuqraadiyadda Haka Barato Somaliland” Dr Edna Adan Ismaaciil
Hargeysa (Hangoolnews.com)-Dr Edna Adan Ismaaciil oo ka mid ah aqoon yahanka Somaliland ayaa si wayn u amaantay doorashadii shalay ka qabsoontay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland.
Dr Edna Aadan oo shalay markii ay codaysay warbaahinta la hadashay ayaa doorashadan oo ah tii lixaad ee shacabku si xor ah wax u doortaan ku tilmaamay mucjiso wax laga barano, si gaar ahna looga baran karo dimuqraadiyadda.
Adna Aadan ayaa xustay in dalal badan oo Afrikaan ahi hal mar samayn kari waayeenn doorasho xor ah oo xalaal ah halka ay Somaliland samaynayso markii lixaad, taasoo ah wax ku cusub taariikhda Afrika iyo Soomaalida “Somaliland waxay muujinaysaa inay tahay dal jira, inay tahay dal ay ka suuro-gasho doorasho xor ah oo xalaal ah oo sidaa u dhacda waa markii lixaad ee mar keliya maaha, dalal baa mar keliya samayn kari waayay. Somaliland-na waa markii lixaad ee ay samayso, wax laga barto weeyaan. Waxaanu rajaynaynaa in Soomaaliya ay Somaliland ka barato dimuqraadiyadda ka jirta oo ay aragto Somaliland inay tahay dal jira” ayay tidi Dr Edna Aadan Ismaaciil oo ka mid ah dadka Somaliland ugu lex-jeclada badan.